वैज्ञानिक कर प्रणाली र व्यवसायीक एजेण्डालाई सफल बनाउनेछु : ज्ञानेन्द्रमान (भिडियो) – Saurahaonline.com
वैज्ञानिक कर प्रणाली र व्यवसायीक एजेण्डालाई सफल बनाउनेछु : ज्ञानेन्द्रमान (भिडियो)
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको चुनावी सरगर्मी यतिबेला बढ्दो छ । उवासंघको अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्रमान शाक्यको पनि उम्मेदवारी रहेको छ । ज्ञानेन्द्रमान शाक्य सुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँ समाजसेवी पनि हो । विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध हुनुभएका शाक्यसँग गरेको कुराकानी ः
म सामाजिक व्यक्तित्व हो । सामाजिक काममा बढी अग्रसर हुन्छु । म २०२४ सालदेखि उवासंघसँग आबद्ध छु ।
नेवाः पुचः नारायणगढको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभवन मसँग छ । म सुनचाँदी व्यवसायी संघको जिल्ला अध्यक्ष भएरसमेत काम गरिसकेको छु । संघको केन्द्रमा रहेर पनि काम गरेको छ । उवासंघको विशिष्ट सदस्यको रुपमा म रहेको छु ।
कुनै समय अध्यक्षको प्रत्याशी पनि भएको हुँ । सामाजिक काममा निरन्तर लागिरहेको छु । माँ मनकामना साकोसको अध्यक्षमा रहेर काम गरेको छु । आर्थिक पारदर्शीता ममा छ ।
म उवासंघको अध्यक्षको लागि सक्षम छु । धेरै संघसंस्थामा रहेर लामो समय काम गरेको अनुभव मसँग छ । यसअघि उवासंघको अध्यक्षमा सहन प्रधानलाई सहयोग गरको हुँ । तर यसपटक म आफैँ उठ्ने निर्णय गरेको हुँ । दुई कार्यकाल अघि म अध्यक्षको प्रत्याशीको रुपमा उठेको थिएँ । त्यो बेला म सिक्ने क्रममा पनि थिएँ । अनुभव बटुल्ने क्रममा पनि थिएँ । अहिले त मेरो सिक्ने काम पनि सकियो, अनुभव बटुल्ने क्रम पनि सकियो । अब त नेतृत्वमा पनि पुग्ने बेला भइसकेको हुनाले अध्यक्षको उम्मेदवार बनेको हुँ । मलाई विश्वास छ, व्यवसायीहरुले मेरो नेतृत्व नै संघको लागि छान्नेछन् ।
व्यवसायीहरुको हकहितको लागि म निरन्तर लड्छु । अहिले करमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । म बनाउँछु । व्यवसायमा विभिन्न समस्याहरु छन्, ती समस्या समाधान गर्न म लाग्नेछु । संघले गरेका कामहरुलाई अगाडि बढाउन लाग्नेछु । चितवन महोत्सवजस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अग्रसर हुने छु । म २०२४ सालदेखि संघमा निन्रन्तर लागिरहेको छु । व्यवसायीको हकहितमा लागेको छ ।
म धेरै कुरा गर्न चाहन्न र ठूलठूला कुराहरु पनि गर्न चाहन्न । तपाइँ हामी सबैलाई थाहा छ कि आज हामी उद्योगी व्यवसायीहरु कुन अवस्थामा छौँ ? चाहे जुनसुकै व्यवसायमा हामी संलग्न भएका नहौँ ? टाउको उठाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । हाम्रो समस्याको समाधान भनेको हाम्रो संस्थाबाटै हुने गर्नुपर्दछ तर त्यस्तो भइरहेको छैन । न त स्थानीय निकायबाट हुन सक्यो न त महासंघबाट नै । नेपाल सरकारले लादेको विभिन्न प्रकारका करहरु त्यतिमात्र होइन, अब त महानगरपालिकाद्वारा उठाइने विभिन्न प्रकारका करहरुले व्यवसाय छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । म उवासंघका नेतृत्वमा जितेपछि सबै समाधान हुने विश्वास दिलाउँछु ।
५) किन गोलाप्रथाको विरोध गर्नुभयो नि ?
सम्पूर्ण व्यवसायीको मत लिएर नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । गोलाप्रथाबाट नेतृत्वमा पुग्ने प्रणालीको मैले विरोध गर्दै आएको छु । हिजो टीकाप्रथा थियो, आज गोलाप्रथा भयो, यो हुनुुहुँदैन । निर्वाचित भएर सही मान्छे नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । मैले यही खोजेको हुँ ।
मतदान गर्न योग्य ३७८२ जन उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको मतलाई बन्धक बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गोलाप्रथा हाँस्यास्पद प्रक्रियाबाट उद्योग वाणिज्य संघ चितवनजस्तो गरिमा बोकेको संस्थाको नेतृत्व चयनमा गोलाप्रथा होइन, निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर म लागिरहेको छु । लोकतन्त्रमा त चुनाव हुनुपर्छ, चुनिएर जानुपर्छ । गोला तानेर, टीका लगाएर कोही नेतृत्वमा आउने हुँदैन ।
६) तपाइँले जित्नुभयो भने केके काम गर्नुहुन्छ ?
मैले जितेपछि धेरै काम गर्छु । कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनेछु । अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित पार्नेछु । म पूरा समाजसेवामा होमिएको छु, मैले व्यवसाय छोराहरुलाई सुम्पेको छु । मैले जितेपछि पूरा समय संघको लागि व्यतित गरी कामहरु गर्नेछु । सबै व्यवसायीहरुलाई मिलाएर अघि बढाउने छु ।
थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण चितवनमा पुष्टि २०७७, ३० श्रावण शुक्रबार